Quizzes Archives - Page2of3- Duwun Quiz
Personality Quizzes / Quizzes
သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းနေတဲ့သတ္တ၀ါက ဘာဖြစ်မလဲ ?
လူတိုင်းဟာ အတွင်းစိတ်သဘောသဘာဝတွေမတူညီသလို အမူအကျင့်စရိုက်တွေလည်း ကွဲပြားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ် သဘောသဘာဝကိုဖော်ညွှန်းဖို့ ကိန်းအောင်းနေတဲ့သတ္တ၀ါကဘာဖြစ်မလဲ ? မေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီး ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်…
သင်နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံး ဖုန်းက ဘယ် brand ဖြစ်မလဲ ?
သင်နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံး phone brand ကိုသိချင်ရင် မေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီး ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်…
သင်နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးအလုပ်က ဘာအလုပ်ဖြစ်မလဲ ?
ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အရာနဲ့ ကိုယ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်က တစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်ထပ်တည်းမကျတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့စိတ်သဘောတရား၊ အကျင့်စရိုက်အပြုအမူလေးတွေပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်အလုပ်ကသင်နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ မေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီး ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်…
သင့်ကိုအရာအားလုံးထက်ပိုချစ်တဲ့သူက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ?
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ့်ကိုယ်အရာအားလုံးထက်ပိုချစ်တဲ့သူက ကိုယ်ထင်တဲ့သူ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာမျိုးပါ။ ဒါဆိုရင် တကယ်လို့ ကိုယ့်ကိုအရာအားလုံးထက်ပိုချစ်တဲ့သူရှိမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူဖြစ်မလဲ မသိချင်ဘူးလား ? မေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီး ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်…
သင့်ချစ်သူကသင့်ကိုထားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်မလဲ ?
ချစ်သူရည်းစားတိုင်းကတော့ အမြဲအတူတကွလက်တွဲသွားချင်ကြတာ ဓမ္မတာပါ။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲရမယ်၊ ချစ်သူကကိုယ့်ကိုထားခဲ့တော့မယ်ဆိုရင်ရော… အဲ့လိုထားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကရော ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်မလဲ ? မေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီး ကြည့်ကြည့်ကြစို့နော်…
သင်နဲ့သင့်ချစ်သူဘယ်နေရာမှာ မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်မလဲ ?
ချစ်သူဖြစ်ဖြစ်၊ Crush ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေ… ကိုယ့်ချစ်သူ၊ ကိုယ့် Crush နဲ့ တစ်သက်တာ လက်တွဲသွားရတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုနေရာမျိုးလေးမှာ မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုတာတော့ စိတ်ကူးယဉ်ဖူးကြမှာပါ။ ဒါဆိုအခု မေးခွန်းလေးတွေဖြေကြည့်ပြီး ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူဘယ်နေရာမှာမင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်မလဲ ကြည့်ကြည့်ရအောင်လေ…
သင့်ဖူးစာရှင်မှာ ဘယ်အားသာချက်(၃)မျိုးရှိမလဲ ?
ကိုယ်နဲ့တစ်ဘ၀လုံးလက်တွဲသွားရမယ့်ဖူးစာရှင်က အားနည်းချက်ရှိသလို အားသာချက်တွေလည်းရှိမှာပါပဲ။ ဒါဆို သင့်ဖူးစာရှင်က ဘယ်လိုအားသာချက် (၃)မျိုးရှိမလဲမသိချင်ဘူးလား ? မေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီး ကြည့်ကြည့်ရအောင်…
သင့်ချစ်သူကသင့်ကို စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမြင်နေလဲ ?
ချစ်သူရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ကိုယ့်ချစ်သူက သူ့စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုထင်နေလဲ၊ ဘယ်လိုမြင်နေလဲဆိုတဲ့အရာက အရမ်းအရေးပါပါတယ်။ ဒါဆိုရင် မေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီး ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့အမြင်က ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်…
သင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းက ဘယ်ဇာတ်ကားနဲ့ဆင်တူဖြစ်မလဲ ?
ချစ်သူရှိနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူရှိလာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းက ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုခုနဲ့များသွားတူနေမလား ? ဒါဆိုရင် ဘယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းမျိုးနဲ့များ သွားတူနေမှာလဲ ? မေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီး ကြည့်ကြည့်ရအောင်…
ချစ်သူနဲ့ ဘယ်ကို ခရီးထွက်ဖြစ်မလဲ ?
လူတိုင်းကတော့ ချစ်သူရှိရင် အတူတူခရီးလေးတစ်ခုလောက် သွားချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါဆိုသင်သာချစ်သူနဲ့ ခရီးထွက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ကိုသွားဖြစ်မလဲ မသိချင်ဘူးလား ? ဒါဆို မေးခွန်းလေးတွေဖြေကြည့်ပြီး ချစ်သူနဲ့ဘယ်ကိုခရီးထွက်ဖြစ်မလဲ ကြည့်ကြည့်ကြမယ်လေ…